Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tambajotra iraisam-pirenena fizahantany fizahan-tany any Bangladesh
Vaovao Mafanina ao Bangladesh • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • People • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • Fandefasana gazety • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Nampahafantarina tao Malezia, Balkans, Arabia Saodita, Afrika ary ireo faritra maro hafa ny vondrona mpizaha tany manerantany momba ny fizahantany. Ny vondrona mahaliana dia deraina miaraka amin'ireo vondrona mpitarika mitarika na inona na inona manomboka amin'ny fiaramanidina ka hatrany amin'ny fandraisam-bahiny, ka hatramin'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany. Ny Toko vao natsangana tao Bangladesh dia mitondra traikefa sy fitarihana amin'ny fifangaroan'ity fikambanana vaovao ity.
The Tambajotra fizahan-tany manerantany dia nanambara ny fananganana ny Vondrona mahaliana ao Bangladesh eo ambany fitarihan'i HM Hakim Ali.
Miaraka amin'ireo vondrona mahaliana, ny World Tourism Network (WTN) dia manome ny mpikambana ao aminy feo mafy eo an-toerana, miaraka amin'izay koa ampidirina amina sehatra iraisam-pirenena ity feo eo an-toerana ity.
WTN dia nanomboka ny fananganana.travel fifanakalozan-kevitra tamin'ny volana martsa 2020 ary nitombo izy ho fiaraha-miombon'antoka tsy miankina amin'ny fanjakana misolo tena ny orinasa antonony sy madinidinika ao amin'ny firenena 127.
Bangladesy, any atsinanan'i India amin'ny Bay of Bengal, dia firenena aziatika atsimo misy marika maitso maitso sy lalan-drano maro. Ny reniranon'i Padma (Ganges), Meghna, ary Jamuna dia mamorona lemaka lonaka, ary mahazatra ny mandeha sambo. Ao amin'ny morontsiraka atsimo, ny Sundarbans, ala honko goavambe zaraina amin'i Atsinanana India, no misy ny tigra Royal Bengal.
Mandra-pahatongan'ny fipoahan'ny COVID-19 tamin'ny martsa 2020, ny fizahan-tany dia mavitrika ary iray amin'ireo sehatra mahasoa indrindra amin'ny toekarena manerantany ary koa ho an'ny firenena an-dalam-pandrosoana toa an'i Bangladesh.
Manana toerana fizahan-tany voajanahary, ara-kolotsaina, ara-tantara, arkeolojia, ara-pinoana ary ara-panjakan'olombelona maro i Bangladesh. Amin'ny fitsidihana ity firenena ity, ny olona iray dia manana fotoana hahafantarana ireo olona ao amin'ny foko sy ny kolontsaina, ny fomban-drazana, ny sakafo ary ny bibidia misy karazany samihafa. Ny mpizahatany koa dia afaka mankafy hetsika maro samihafa mifandraika amin'ny fizahan-tany toy ny fanaovana ski anaty rano, fitsangantsanganana an-dranomasina, fitsangantsanganana, fivoy, sambo, fandroana an-dranomasina, sns.
Ny indostrian'ny fizahantany dia heverina ho indostria mitombo ho an'ny firenena an-dalam-pandrosoana. Manana andraikitra lehibe sy ankolaka amin'ny tahan'ny fitomboan'ny harin-karena faobe ao Bangladesh izy amin'ny alàlan'ny famoronana fotoana vaovao ho an'ny lahy sy ny vavy, manamaivana ny fahantrana, manatsara ny fandraisana anjaran'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana, mahazo vola vahiny amin'ny alàlan'ny mpizahatany vahiny, manatsara ny fari-piainan'ny mponina ary manamboatra milamina ara-toekarena sy ara-tsosialy ny olona.
Fizahan-tany any Bangladesh
World Network Network no feo efa ela niverenan'ireo orinasa kely sy salantsalany amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany. Amin'ny alàlan'ny fampitambarana ny ezaka, ny WTN dia mametraka lohalaharana ny filàna sy ny hetahetan'ny orinasa kely sy salantsalany ary ny mpiray antoka aminy.
Betsaka ao Bangladesh no milaza fa Andriamatoa HM Hakim Ali no mpanorina ny indostrian'ny fizahantany any Bangladesh. Izy dia filohan'ny Association International Hotel Bangladesh.
Tao anaty fanambarana an-gazety androany, tamim-pireharehana ny tambajotran'izao tontolo izao dia nanambara ny fanendrena an'i Andriamatoa HM Hakim Ali no hitarika ny WTN vaovao Vondrona liana any Bangladesh.
Juergen Steinmetz, Filoha, WTN
Ny filohan'ny WTN Juergen Steinmetz dia nilaza hoe: “Nandeha tany Bangladesh aho dia nahita ny mety ho indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany ary mahatakatra ny fiantraikan'ny toekarena amin'izany firenena izany. Manantena izahay fa ny vondrona liana vaovao, ary Andriamatoa Ali amin'ny maha-mpitarika azy, dia hanisy fiovana lehibe amin'ny famolavolana ny indostrian'ny fizahantany any Bangladesh amin'ny alàlan'ny rivodoza COVID-19.
Ireo mpandraharaha antonony sy madinidinika dia mitana andraikitra lehibe sy tena ilaina ao Bangladesh, ary vonona ny hijanona ho an'ny tombontsoan'ity vondrona ity i WTN miaraka amin'i Andriamatoa Ali sy ny komitiny tsara momba ny fizahan-tany any Bangladesh sy ireo mpitarika fizahan-tany. ”
HM Hakim Ali, Filoha, WTN Bangladesh Chapter
Ny filohan'ny WTN Bangladesh Chapter, HM Hakim Ali, izay tompon'ny Hotel Agrabad Ltd.., nanambara ny komitiny misy mpikambana 13.
Amin'ny fampiarahana ireo mpikambana ao amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina amin'ny sehatra rezionaly sy manerantany, ny WTN dia tsy vitan'ny mpisolovava ho an'ny mpikambana ao aminy fa manome azy ireo feo amin'ny fivorian'ny fizahan-tany lehibe.
WTN dia manome feo politika sy raharaham-barotra sarobidy ho an'ny orinasa madinidinika sy salantsalany ary manolotra fiofanana, torohevitra ary fotoana mety amin'ny fanabeazana.
"Famerenana indray ny dia”Fandraisana andraikitra dia resadresaka, fifanakalozana hevitra ary fampisehoana ho an'ny fanao tsara indrindra ataon'ireo mpikambana ao amin'ny firenena maherin'ny 120.
The "Hero" Ny loka dia manaiky ireo izay mandeha lavitra manompo ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany fizahan-tany nefa matetika no tsy jerena.
The "Tombo-kase fizahan-tany azo antoka”Manome ny mpiray antoka aminay sy ny toerana itodianany sehatra hanehoana ny fahavononany hanokatra indray ny fizahan-tany soa aman-tsara.
Mba hahatratrarana ireo tanjona ireo, ny WTN dia mamporisika ny fametrahana vondron'olona liana, ao anatin'izany ny toko eo an-toerana, izay afaka hamaha ny olana manokana eo an-toerana sy manerantany ao anatin'ny toerana misy azy eo an-toerana sy manerantany.
Ny WTN Bangladesh Toko
HM Hakim Ali - Filoha
MN Karim - filoha lefitra
Mehedi Amin - filoha lefitra
Syed Ghulam Qadir - Sekretera jeneraly
Taslim Amin Shovon - Jt. Sekretera jeneraly
Syed Ghulam Mohammed - Tale
Syed Mahbubul Islam - Tale
Abdullah Al-Kafi - Tale
Mohammad Irad Ali- Tale
Nazrul Islam - Tale
Ahmed Hossain - Tale
Ariful Haque - Tale
Sohail Majid - Tale
Ny foibe WTN dia any Honolulu, Etazonia. https://wtn.travel/ https://wtn.travel